SAMBAVA : Vola sandoka 10 tapitrisa Ariary saron’ny Polisy, lehilahy miisa 3 voasambotra
Tsara hatrany ny manamarika fa melohin’ny lalàna asa an-terivozona mandra-pahafaty ny fanamboarana vola sandoka eto Madagasikara. 28 octobre 2019
Tsikaritra mantsy fa efa hain’ireo olon-dratsy tanteraka ankehitriny ny manamboatra vola sandoka, efa raitra rahateo koa ny fitaovana ampiasaina. Fantatra tamin’ny angom-baovao voaray nisesisesy tato ho ato fa ny vola roa alina Ariary tokana no tena nahitana sandoka niparitaka tamin’ny Faritra maro. Ankoatra ireo vola tsy tena izy sarona teto an-drenivohitra dia nahatrarana izany ihany koa tao Sambava. Taorian’ny fihainoana ireo fitarainan’ny mponina sy ny fanamarinana ireo angom-baovao azo mahakasika ny fiparitahana vola sandoka iray alina Ariary tao an-tampon-tanànan’i Sambava dia nandray andraikitra avy hatrany ny Polisy avy eo anivon’ny kaomisaria sambava, ka nanokatra fanadihadiana.
Nisy ny vela-pandrika izay nomanin’ireo Polisin’i Sambava. Tamin’izay fotoana izay no nahatratrarana ny roa tamin’ireo tompon’antoka amin’ity fanamboarana sy fanaparitahana vola sandoka ity ny andron’ny alarobia 23 oktobra 2019 teo tao amin’ny fokotanin’ Antaimby-Sambava. Nandritra ny famotorana izay natao no nahafantarana fa amidin’izy ireto iray alina Ariary ny vola sandoka roa alina Ariary, ary mbola nahitana vola sandoka mitentina 10 tapitrisa Ariary ihany koa moa ireto roa lahy ireto nandritra ny fisavana ny entan’izy ireo.
Tsy nijanona hatreo ny fanadihadiana nataon’ny mpitandro filaminana nisahana ny raharaha fa mbola nitohy hatrany, hany ka ny andron’ny alakamisy 24 oktobra 2019 teo dia tra-tehaka indray koa ny naman’ireto roa lahy ireto tany amin’ny tanànan’ Antalaha, izay nahatratra ireo fitaovana sy kojakoja samihafa entin’izy ireto manamboatra ireo vola sandoka. Miezaka ny Polisin’ny eo anivon’ny kaomisarian’ny Sambava amin’izao fotoana manohy ny fikarohana ireo vola sandoka efa niparitaka tao an-tampon-tanàna sy ny manodidina. Karohina rahateo koa ireo izay mety ho mpitsikombakomba hafa tamin’ity tranga ity.
Lehilahy iray niakatra fampanoavana amin’ny raharaha vola sandoka
Lehilahy iray nikasa hanakalo vola sandoka mitentina roa tapitrisa Ariary no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ ny surêté urbaine d’Antananarivo ny zoma 25 oktobra maraina lasa teo iny. Raha ny loharanom-baovao voaray dia vokatry ny fiaraha-miasan’ny Polisy tamin’olona tsara sitrapo no nahazoana loharanom-baovao ka nahafahan’ny Polisy nametraka vela-padrika . Avy hatrany dia noraisim-potsiny teny amin’ny faritra 67ha ity lehilahy ity niaraka tamin’ny vola sandoka teny aminy izay saika hatakalo.
Tamin’ny famotorana lalina natao azy dia niaiky tokoa ny lehilahy fa azy ireo vola sandoka ireo ary saika hamidiny iray hetsy vola tena izy ny vola sandoka roa tapitrisa Ariary. Araka ny fanazavany ihany dia fiara tsy mataho-dalana na 4x4 izay tsy tadidiny ny laharana no namatsy azy ireo vola sandoka ireo ka mbola mitohy ny fikarohana ireo izay ahiana mety ho mpiray tsikombakomba taminy . Ny Sabotsy faran’ny herinandro teo no natolotra ny fampanoavana ny raharaha.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68198) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (638) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (344) 21 février 2020 Niatrika famotorana savaranonando omaly maraina NY RADO RAFALIMANANA (227) 19 février 2020 Nidina ifotony nijery ny fanamboarana ny Kianja Barea ny Filoham-pirenena FANATANTERAHANA NY VELIRANO (215) 18 février 2020 Zandary iray nitifitra nahafaty ny Raibeny, nitifi-tena koa izy ka maty AMBALAVAO (195) 18 février 2020